Imifudlana yeWebtrends: Ukubona Kwangempela Kwesikhathi Nokubhekisa | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 4, 2013 NgoMsombuluko, Februwari 4, 2013 Douglas Karr
Ingqungquthela yaminyaka yonke kaWebtrends, Zibandakanye, Ngisanda kuqeda futhi bamemezela ezinye izithuthukisi ezithakazelisayo kwisoftware yabo njengesevisi (SaaS) analytics Ukunikela Ukusakaza KweWebtrends™.
Ukusakaza KweWebtrends™ inikeza imininingwane ecebile esezingeni lezivakashi ekhombisa ukuthi ikhasimende ngalinye lenzani esimisweni salo samanje. Inikeza ukulandelana kwemicimbi eholele ikhasimende lapho likhona khona manje njengoba kwenzeka, okuvumela abathengisi ukuthi banqume ukuthi yimiphi imikhiqizo lowo msebenzisi ngaphambilini ayithenge noma ayibheka, noma iyiphi indlela eyathathwa ngaphambi kokuba isenzo sokugcina siphothulwe. Ibuye inikeze ngemininingwane efingqiwe yeseshini yenani eliphakeme ekusakazeni kufaka phakathi inani lokubukwa komkhiqizo, imicimbi, ukuthengwa nesimo sokulahlwa esiqondene nalesosikhathi. USteve Earl, uMqondisi Wezokumaketha Komkhiqizo weWebtrends.
Imifudlana yeWebtrends ingumkhiqizo ozimele - futhi ingaxhunyaniswa nganoma iyiphi analytics ipulatifomu kufaka phakathi iWebtrends, kunjalo.
Kukhona ukubonwa okubalulekile kwe-4 abathengisi abangakusebenzisa ukusiza ukunquma, ngesikhathi sangempela, ukuthi ungakhomba kanjani okuqukethwe kusayithi.
Gcina ishayela lokuthi amakhasimende eza kanjani kusiza sakho nokuthi afunani uma efika lapho.
Nika amandla ukuqonda ngokushesha kokuthi amakhasimende avela kuphi futhi aya kumakhasi ngamanye kusayithi. Lokhu kuqondisisa ngomthamo wamakhasi asekhaya noma ukukala ukuthi ikhasi elithile lokufika lomkhankaso lenza kanjani.
Ukubukwa Komsebenzi Womhlaba Wonke
Thola ukuqonda okubucayi ngendawo yezivakashi zakho nokuthi zifika kanjani kusayithi lakho. Yibuke bukhoma njengoba amakhasimende angena kusayithi lakho.
Buka ukuthi izivakashi zakho zifundani njengamanje nokuthi hlobo luni lwedivayisi.
Idatha efakiwe ayenzelwanga ukubona nje, noma kunjalo. Imininingwane yomcimbi iyabanjwa futhi ithunyelwe kuseva yeqoqo lokusakaza (i-SCS). Injini yokucubungula esezingeni eliphakeme ihlaziya futhi icebise idatha yomcimbi ngemizuzwana emithathu noma ngaphansi. Imininingwane bese itholakalela i- API ngefomethi ye-JSON, futhi ingadliwa uhlelo lokusebenza noma ukubonwa ngamehlo ngokuxhumeka kwezisekelo zewebhu kanye ne-Webtrends Streams API.
Ngaphezu kwalokho, i-retargeting kungenzeka manje nge-Webtrends Streams ye Izimpendulo. Lelisu linganciphisa kakhulu iwindi lesikhathi futhi lithuthukise amathuba okuphumelela kwabakhangisi maqondana nemicimbi yokulahla online, enjengezinqola zokuthenga, ukubukwa komkhiqizo nokushiywa kwesiphequluli.
Idatha yeseshini i-Streams data ngaphakathi kweWebtrends Optimize ithuthukisa ukuhlolwa kwe-onsite nokukhomba, inikeze abathengisi amandla wokusebenzisa ulwazi olusezingeni lesivakashi esisesikhathini ukuze kukhulise ukubaluleka kokuhlangenwe nakho kwamakhasimende, okuzogcina kushayela amazinga wokuguqulwa amakhulu. Cabanga amagoli eseshini ephelele ngesikhathi sangempela!
Tags: izibalo apiApiizimpenduloi-retargetingseismographUkusakazaimifudlanaukubukaimvuimifudlana ye-webtrends